'मेरो गालीले सिक्यौं भन्ने पनि छन्'- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
चैत्र ३०, २०७५ कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौँ — मिस नेपाल प्रतियोगिताको अडिसनमा एक सहभागीलाई मेकअप नलगाएको भनेर आलोचना गरे पछि रचना गुरुङ शर्मा ले सामाजिक सञ्जालमा भने त्योभन्दा चर्को आलोचना खेपिन् ।
मिस नेपालको अडिसनमा मेकअपलाई किन यतिबिघ्न जोड ? नलाउँदैमा अपमान हुन्छ र ?
किनभने ब्युटी प्याजेन्टका लागि यो आधारभूत कुरा हो । मेकअप लाउन आउँदैन भने भाग लिनै नआऊ भन्छु म । प्रतियोगितामा भाग लिनुअघि केही न केही तयारी हुनैपर्छ । तयारी नगरी आउनु भनेको हामीमाथि अपमान नै हो ।
मिस नेपालले ॅब्युटी विद ब्रेन’ को कुरा गर्छ । तपाईंले बाह्य सौन्दर्य मात्रै जाँच्नुभयो । भित्री सौन्दर्यको अर्थ हुँदैन ?
भित्री, बाहिरी दुवै सौन्दर्य बराबर चाहिन्छ । सौन्दर्य प्रतियोगितामा आउँदा यसको आधारभूत आवश्यकताबारे जानकारी हुनुपर्छ । मान्छेले ठाउँ र समयअनुसार व्यवहार गर्ने हो । जागिरको अन्तरवार्ता दिन जाँदा तपाईं चप्पल पड्काएर जानुहुन्छ ? हुन्न नि । एयरहोस्टेसका लागि निश्चित उचाइ किन तोकिएको ? सबैको आ–आफ्नै क्राइटेरिया हुन्छ । सौन्दर्य प्रतियोगिताको पनि छ । यहाँ मेकअप बेसिक निड हो ।
यही कुरा शान्तसँग भन्न सकिन्थ्यो होला । किन त्यस्तो रूखो ?
म कडा नै छु । यसबारे पहिले केहीलाई थाहा थियो, अब सबैलाई थाहा भयो । मान्छे सबै मीठो बोल्ने हुँदैनन् । कोही त छुच्चो पनि हुनुपर्‍यो नि । म २५ वर्षदेखि यो क्षेत्रमा छु । भिडियोमा देखिएभन्दा धेरै कडा छु । वातस्वमा, त्यो गाली त केही होइन । मेरै गालीले धेरैथोक सिक्यौं भन्ने केटीहरू छन् । यसबारे अरूलाई के थाहा !
अडिसनको क्लिप भाइरल भएपछि तपाईं आलोचित हुनुभयो ।
नकारात्मक कमेन्ट गर्नेसँग मलाई कुनै गुनासो छैन । म सकारात्मकै छु । सानो मन गर्ने, आत्तिने खालको मान्छे म होइन । बरु, मेरा छोरीहरूलाई अलि अप्ठ्यारो पर्‍यो । उनीहरूलाई समेत यसबारे धेरैले सोधेर हैरान पारे । भिडियोको अघि–पछि काटेर प्रसंग नमिल्ने गरी सोसल मिडियामा राखियो, त्यो गलत भयो ।
तपाईंको प्रश्नले ती सहभागीलाई पनि निरुत्साहित गर्‍यो होला ? भिडियोमा उनी नर्भस देखिन्छिन् ।
उनी धेरै सम्भावना भएकी केटी हुन् । धेरैथोक सिकिसकिन् अहिलेसम्म । आई एम प्राउड अफ हर । उनलाई हामीले त्यो बेला नै उत्कृष्ट पच्चीसमा छानेका थियौं । उनी निरुत्साहित भएकी छैनन्, खुसी छन् । यो भिडियो आएपछि बरु ‘मेरा कारण म्यामलाई समस्या भयो होला’ भनेर चिन्तित भइन् कि भनेर मलाई पो उल्टै माया लागिरहेको छ ।
भिडियो किन भाइरल भएको होला ?
त्यो डा. कल्याण भन्नेले हाम्रो अडिसनको भिडियो अघि र पछि काटेर बीचको अलिकति मात्रै राखेछ । मलाई नराम्रो देखाउन त्यसो गरिएको हो । उसलाई चर्चित हुनुपरेको होला । मसँग खेल खेलेको हो । कुन प्रसङ्गमा भनिएको कुरालाई बीचमा अलिकति हाइलाइट गरेर राखिएकाले त्यसमा म छुच्ची देखिएँ । त्यसपछि के चाहियो र ? सबै पछि लागिहाले । के भएका होला मान्छेहरू ! पोहोर माल्भिकालाई अट्याक गरियो, यसपालि म परेँ।
प्रस्तुति ः सजना बराल